४१ जनाको मृत्यु १२ जनाको मृत्यु संगै ७९४ जना संक्रमित ८०८ जना निको भए - Gulmeli Online TV
३ बैशाख २०७९, शनिबार १५:०३
नारायण भण्डारी हङकङ १६ अप्रिल २०२२
हङकङमा कोरोनाको पाचौ लहरले केही थकाई मेट्दैछ। हिजोबाट कोरोना संक्रमितको संख्या ३ अंकमा झरेको छ भने मृतकको संख्या २ अंकमा झरेको छ।
हङकङमा आज ७९४ कोभिड-१९ का केसहरू छन जसमा न्यूक्लिक एसिड परीक्षण र ४४७ जनामा ​​संक्रमण पुष्टि भएको छभने Rapid Antigen Test (RAT) अनलाइन मार्फत ३४५ केसहरू पुष्टि भएका हुन। पाँचौं लहरमा हालसम्म कुल १,१८४,४४७ जना संक्रमित भएका छन। आज १२ वटा केसहरू आयातित रहेका छन। तीमध्ये ९ जना हिजो ४ फरक उडानमा आइपुगेका छन् । ४ उडान नं. KL819 र ३ जना उडान नं. CX865।
नयाँ पुष्टि भएका ४ सय ४९ जनामध्ये ७३ जना अस्पताल प्राधिकरणबाट, थप १०० जना स्वास्थ्य विभागको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट र बाँकी २७६ निजी प्रयोगशाला वा सामुदायिक परीक्षण केन्द्रबाट प्रत्यक्ष पुष्टि भएका छन। परीक्षण गरिएका २३७ केसहरू मध्ये, डेल्टा भेरियन्ट समावेश भएको कुनै पनि केस थिएन। २३३ केसहरू ओमिक्रोन भेरियन्टमा समावेश थिए भने कम भाइरल लोडका कारण लगभग ४ केसहरू पत्ता लगाउन सकिएन।
पाँचौं लहरको शुरुवातदेखि हालसम्म जम्मा ८ हजार ८ सय ९७ (३ हजार ६ सय ६५ महिला र ५ हजार २ सय ३२ पुरुष) बिरामीको मृत्यु भएको र कुल ४१ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अस्पताल प्राधिकरणका डा. ल्यारी लीले अझै ८,२८० भन्दा बढी बिरामी अस्पतालमा भर्ना भइरहेको बताए। हालसम्म ५ जना बिरामीको अवस्था गम्भीर थियो (१ जनाको खोप लगाइएको थिएन) र तीमध्ये ३ जनाको अवस्था अझै गम्भीर छ । गम्भीर अवस्थामा रहेका ५२ जनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
सरकारी अस्पतालमा आज बिहान १२ बजेसम्म पछिल्लो २४ घण्टामा ३४ बिरामीको मृत्यु भएको छ । बिरामीहरूमा ४४ देखि १०३ वर्षका १७ पुरुष र १७ महिलाहरू छन। तिनीहरूमध्ये १४ आवासीय हेरचाह गृहका थिए। तीमध्ये १३ जनालाई खोप लगाइएको छैन। तीमध्ये ८ जनालाई एउटा खोपको डोज र १२ जनालाई दुईवटा खोपको डोज र १ जनालाई ३ डोजमा खोप लगाइएको थियो ।
थप रूपमा, यो पनि घोषणा गरिएको थियो कि त्यहाँ कुल ७ ढिलो-रिपोर्ट गरिएको मृत्यु भएको थियो जसमा २ पुरुष र ५ महिलाहरू ८१ र ९१ वर्ष बीचका थिए।
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ सय ८ जना निको भएका छन् । यसैबीच, भर्ना स्क्रिनिङका क्रममा ४ जना बिरामीमा पोजेटिभ देखिएको छ भने नजिकका ४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
यसैबीच अस्पताल प्राधिकरणअन्तर्गतका २१ हजार ८२३ कर्मचारीमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ । जसमध्ये २० हजार ८१५ निको भएर काममा फर्किएका छन् ।